AbaseMalawi basaba ukuhlaselwa | News24
AbaseMalawi basaba ukuhlaselwa
ABOKUFIKA abayi-165 baseMalawi sebencamele ukulifulathela leli babuyele ekhaya bayodlala indlala okunokuba baqhubeke nokuba yizisulu zokuhlukumezeka eNingizimu Afrika.
Laba bami ngomumo ukulifulathela njengoba belinde eDales Park edolobheni okuyilapho begobe khona amadlangala kusuka ngoLwesithathu olwedlule. Lapha ababekelwe khona ithende lokubakhuselisa yilapho bevakashelwe khona uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Weziwe Thusi ngoLwesine.
Laba bokufika ababaleke e zindaweni ezahlukene zalapha eMgungundlovu okuyindawo yaseCinderella Park, Emasukwane, Bombay batheleke kule nkundla kusukela ngoLwesithathu olwedlule ngenxa yokusaba emva kuqubuke izigameko zokuhlaselwa kwabokufika kulona leli dolobha. Bonke futhi bakujabulele ukubuyela emakhaya abo ezweni laseMalawi njengoba bekusemalungiselelweni okuthi kulunge amaphepha abo ukuze bakwazi ukuhamba.
“Imbangela yokusuka size sifike lapha kungenxa yokuthi sizobheka njengoba sitsheliwe ukuthi kunabokufika abahlezi kule nkundla. Ukuza kwethu ukuzobheka isimo siphinde sithole nembangela yokuthi ngabe yini ebalethe lapha nokuthi ngabe baphephile yini. Kuyajabulisa ukuthi iningi labo liyasho ukuthi lilapha ngoba lisaba kusukela kwenzeka izehlakalo zokuhlaselwa kwabokufika. Abekho abathi bona bashayiwe. Okunye bayachaza ukuthi nabo bayafuna ukuthi babuyele emakhaya khona ezweni lakubo eMalawi,” kusho uThusi.
“Iningi lethu ligqekezelwe futhi ubungathi batshelene ukuthi abasihlukumeze ngale ndlela. Abanye bethu bathathelwe izimpahla, abanye bashawa.
“Yize abanye bengazange benziwe lutho kodwa siyasaba manje asiziboni sisamukelekile futhi sisahleli lapha esinye isikhathi. Okusilungele ukuthi sihambe sibuyele emakhaya ezweni lethu,” kusho yena.
Unobhala we-ANC esifundeni iMoses Mabhida uMnuz Supa Zuma uthe abakutholile kule nkundla ukuthi iningi labokufika elikhona elasezweni iMalawi.
“Esikutholayo ukuthi lezi zakhamizi zaseMalawi zifuna ukubuyela ezweni lazo ngenxa yokwesaba. Abekho abathi bahlukunyeziwe,” kusho uZuma.